एमालेका वडा अध्यक्ष उम्मेदवारको नागरिकता खारेज
दोहोरो नागरिकता लिएका एमालेका तर्फबाट वडा अध्यक्षका उमेदवार जयराम कुनवरको नागरिकता खारेज गरिएकोे छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले कुनवरले लिएको पछिल्लो पटकको नागरिकता खारेज गरेको हो ।
राजपा वडाध्यक्ष उम्मेदवारको निधन
प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन आउन दुई दिन मात्र बाँकी रहेको समयमा सप्तरीका एक जना उम्मेदवारको निधन भएको छ ।
कन्चनपुरको हल्दुखालमा १३ बर्षीय बालकको हत्या भएपछि त्यहाँको अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। मृतकका आफन्तले हत्या गर्ने आशिष अधिकारिको घर गोठमा आगजनी गर्न थालेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो। आक्रोशित समुहले अधिकारीको गोठमा आगजनी गरिदिएका छ्न्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज तराई आउदै
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज तराई आउने भएका छन् । प्रदेश २ मा असोज २ गते हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि अन्तिम चुनावी सभा सम्बोधन गर्न ओली तराईका विभिन्न स्थानमा पुग्ने भएका हुन् ।
टिकट बितरणमा बिबाद भएपछि फोरम नेतृलाई कार्यकर्ताले घरमा थुने
११ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेश नम्बर २ प्रदेशका ८ जिल्लाका १३६ मध्ये ११६ स्थानीय तहका उम्मेदवारहरु टुंगो लगाएको छ ।
पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा ७३२ मत प्राप्त गरी आचार्य विजयी (मतसहित)
पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा ७३२ मत प्राप्त गरी आचार्य विजयी
काठमाडौंमा रविन्द्र धानुक, अपराध महाशाखामा दिवेश लोहनी
राजपा नेपालले छाता निर्वाचन चिन्ह नपाउने भएपछि साइकल रोज्ने
राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले छाता निर्वाचन चिन्ह नपाउने भएपछि साइकल रोज्ने भएको छ।
३२ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनको समय तीन दिन थपेको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले म्याद थपको निर्णय गरेको हो ।
प्रहरीले माग्यो जवानदेखि निरीक्षकसम्म, १ हजार १७२ ले जागिर पाउने
३१ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदमा भर्ना खुलाएको छ । मंगलबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदमा गरी १ हजार १ सय ७२ जना जनशक्ति माग गरेको छ ।
तीन दिनदेखिको वर्षाका कारण मकवानपुरमा पहिरामा परी एकै परिवारका सात जनाको मृत्यु
तीन दिनदेखिको वर्षाका कारण मकवानपुरमा पहिरामा परी एकै परिवारका सात जनाको मृत्यु छ .
देशभरि बाढीपहिरोको कहर, कम्तिमा ३३ जनाको ज्यान गयो ,बाढीको बितण्डा स् देशभर कहाँ के भयो ?
एमालेले प्रदेश २ को चुनावमा ६० बढी स्थानीय तह जित्ने केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले रिपोर्टिङ
वीरगंज,२६साउन प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश २ को चुनावमा ६० बढी स्थानीय तह जित्ने र पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरेको छ ।
मधेशमा स्थानीय निकायको संख्या बढ्ने, पर्सामा २ वटा थपिएको स्थानिय तह कार्यान्वयमा ,तर राजपा चुनावमा जाने अझै अनिर्णनित
मधेशमा स्थानीय निकायको संख्या बढ्ने भएको छ । सअघिको सरकारले मधेशमा थप्ने भनेको स्थानीय निकायमा सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो ।
सप्तरीमा खाँडो नदीको बाँध ्भत्किदा ४ सय घर डुबानमा १ जना बेपता
साउन २६ सप्तरी सप्तरीको विरौलामा खाँडो नदीको बाँध बाढीले गर्दा भत्किएको छ ।
डा.केसीको समर्थनमा सरकारी चिकित्सक पनि आन्दोलनमा
काठमाडौ,२६साउन अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कार्यरत चिकित्सक पनि संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक आज पनि बस्दै
काठमाडौ,२५साउन व्यवस्थापिका संसदको बैठक आज पनि बस्दैछ । संसद सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा विभिन्न १२ संभावित विधेयक प्रस्तुत हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
यथास्थितिमा राजपा चुनावमा सहभागी नहुने केन्द्रिय कमिटीको निर्णय
वीरगंज,२५साउन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) आफूले उठाएका माग पूरा नभएसम्म चुनावमा नजाने भएको छ ।
रौटहट घटना पछि वीरगंजबासीलाई बालबालिकाको चिन्ता ,यहा पनि अवस्था त्यस्तै छ , ज्यानमारा सडक निमार्णमा फोरम नेपाल पर्साको चासो ,सेवामा सरावगी पनि अग्रसर
विन्दुभुषण साह विरगंग,२५ साउन रौटहटमा सडक निमार्णको क्रममा खनिएको खाल्डोमा पुरिएर एकै परिवारको ४ जना बालबालिकाको ज्यान गएपछि विरगंजमा त्यस्तो अवस्था नआओस भनेर संघिय सामाजबादी फोरम नेपाल पर्साले सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन तथा आफैले सडक मर्मत गर्ने कार्यमा अग्रसर भएको छ ।
फेल भएका अस्थायी शिक्षकलाई पनि सुविधा र औषधि उपचार
२४ साउन, काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा फेल भएकालाई पनि सुविधा दिन अर्थमन्त्रालयले सहमति जनाएपछि शिक्षा ऐनमा नवौं संशोधनको गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।